Soalala: Lehiben’ny Distrika vaovao amin’ny Tranom-panjakana vaovao | Région Boeny
Notanterahina ny ny 12 desambra 2014 tao amin’ny tranompokonolona any an-toerana ny fametrahana ny Lehiben’ny distrika vaovao ho an’i Soalala izay notarihin’ny Lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra Boeny, Atoa Hemedy.
Atoa Rachidy Oumar Houssen, Administrateur civil, indray no Lehiben’ny distrika vaovao ao Soalala nandimby toerana an’Atoa Ranjakasoa Mparany Gabbie Mamy Angelin, Attaché d’Administration, izay voatendry any an-toeran-kafa.
Ilaina hoy Atoa Lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra ny fiaraha-miasan’ny rehetra amin’ny Lehiben’ny distrika indrindra eo amin’ny fitandrovana ny filaminana. Tokony hamafisina ny fitakiana ny fankatoavana ny Dinan’ny fandriam-pahalemana aty Soalala. Nanentana ny vahoaka koa izy tsy hikely soroka amin’ny famonoana ny afo vokatry ny doro-tanety, indrindra ny eny amin’ny manodidina ny valan-java-boaharin’i Baly noho izy io harem-pirenena iombonana.
Nanomboka ny taona 2009 dia inenina nisolo ireo Lehiben’ny Distrika tao Soalala. Teo ny fahala-vitan’ny toerana sy ny haratsin’ny làlana, ny tsy fahampian’ny filana fototra any an-toerana, toy ny fampianarana, ny fitsaboana ary ny fandriampahalemana. Efa samy nahitam-pivoarana avokoa ireo efa ho roa-taona izao raha ny voalazan’ny Ben’ny tanànan’ny Soalala sy ny Komandin’ny Brigadin’ny zandary an-toerana.
Fa ny tena anisany tsy naha-tamana ireo Lehiben’ny distrika dimy nifandimby dia ny faharatsian’ny tranom-panjakana fonenana sy fiasan’izy ireo izay efa rava hatrany amin’ny 95% vokatry ny rivo-doza nifanesy nandritra ny taona maro. Ilan’efitra iray sisa nijoro sy nitafo, nialokalofan’ireo solotenam-panjakana ireo. Toe-javatra izay nampihen-danja ny hasin’ireo Lehiben’ny distrika teo imason’ny vahoakan’i Soalala sy ireo vahiny miasa na mandalo tany an-toerana, araka ny fitarainana nifandimby avy amin’izy ireo.
Dimy taona aty aoriana, vokatry ny fiaraha-miasan’ny fanjakana malagasy sy ny orin’asa sinoa Mada Wisco mpitrandraka vy ao Soalala, dia efa vita hatrany amin’ny 85% ny fanarenana io tranom-panjakana fonenana sy fiasan’ny Lehiben’ny distrika io ary ho tokanan’ny Lehiben’ny Faritra Boeny ato ho ato.
Nanatanteraka fizarana tambin-karama avrily, may ary jona ho an’ireo Lehiben’ny Fokontany sy ny lefiny ao amin’ny distrikan’i Mitsinjo ihany koa ny delagasion’ny Faritra taorian’ity lanonam-panjakana ity.